Fahadiovan'ny orona amin'ny zazakely | Bezzia
Fahadiovan'ny orona amin'ny zazakely
Maria Jose Roldan | 05/09/2021 11:36 | zaza
Ny fahadiovan'ny orona amin'ny zazakely dia andraikitra tokony hataon'ny ray aman-dreny am-pitandremana sy malefaka. Zava-dehibe ny fanatanterahana an'io fahadiovana io matetika, indrindra rehefa marary ny zaza. Ny fahaizana manadio ny vavorona dia afaka manampy ny zazakely hifoka rivotra tsara, zavatra manan-danja raha ny torimaso tsara indrindra azo atao.
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hiresaka bebe kokoa momba ny fahadiovan'ny orona amin'ny zaza sy ny torolàlana arahinao mba hanaovana azy amin'ny fomba tsara indrindra.
1 Rahoviana no hanao fahadiovan'ny orona amin'ny zazakely
2 Dingana rehefa manao fahadiovana orona eo amin'ny zaza
Rahoviana no hanao fahadiovan'ny orona amin'ny zazakely
Ny fahadiovana toy izany dia tokony hatao amin'ny fomba mahazatra mba hanesorana ny molotra betsaka araka izay azo atao ary hanadio ny vavorona. Raha sendra misy sery ny zazakely, ny ray aman-dreny dia tsy maintsy manao fidiovana toy izany ary miantoka fa afaka miaina tsara araka izay tratra ny zaza. Ny fanafoanana ny mucus betsaka araka izay azo atao dia zava-dehibe ihany koa mba tsy hijaly amin'ny aretina sasany toy ny sinusitis ny kely.
Ankoatry ny fahadiovan'ny orona, ny ray aman-dreny dia afaka misafidy ny hametraka hamandoana ao amin'ny efitrano mba hitazomana tontolo iainana mando ary hisorohana ny fitohanana amin'ny lalan'ny orona amin'ny zaza. Amin'ny volana ririnina sy noho ny hafanana, lasa maina be ny tontolo iainana ary miharatsy ny fitohanana, noho izany ny maha-zava-dehibe ny fampiasana hamandoana.
Dingana rehefa manao fahadiovana orona eo amin'ny zaza
Ny zavatra voalohany tokony hataon'ny ray aman-dreny dia ny mandry ny zanany, amboninny malemy sy mahazo aina. Ny zavatra manaraka tokony hataon'ny ray aman-dreny dia ny mampitony ny zanany araka izay tratra. Ho an'ity dia tsara ny manana ny fanampian'ny vadinao na olon-kafa.
Avy eo dia tokony ampiana ranon-tsiranoka masira roa amin'ny vavorona roa. Ny serum dia manampy amin'ny famongorana ny tsiranoka nanangona ary amin'ity fomba ity dia azo antoka fa afaka miaina tsara kokoa ilay kely. Ankoatra ny serum, ny ray aman-dreny koa dia afaka mampiasa vahaolana masira izay manampy amin'ny fanadiovana tanteraka ny orona.
Matetika mampiady hevitra ilay aspirator malaza ary amporisihina hampiasa azy io raha sanatria ka zava-dehibe loatra ilay tsiranoka. Mila mitandrina tsara ianao amin'ny fampiasana azy satria raha ampiasaina tampoka dia mety hiteraka ratra amin'ny sofina toy ny otitis. Na izany na tsy izany, Manoro hevitra ny manam-pahaizana ny amin'ny fampiasana serum isaky ny mety sy amin'ny fotoana mety.
Raha fintinina, ny fahadiovan'ny orona dia tena zava-dehibe mandritra ny volana voalohany amin'ny ain'ny zaza. Araka ny efa noresahintsika tetsy ambony dia zavatra tsy maintsy atao tsara izy io mba tsy hitebiteby be loatra ilay zaza. Ny fidiovana dia tokony hatao amin'ny zaza milamina tanteraka ary ampiharina amin'ny ankamaroan'ny tranga, serum ara-batana na vahaolana masira. Ny fitohanana amin'ny zaza dia mahazatraNoho izany ny maha-zava-dehibe ny fahadiovana tsara mba hanafoanana ny mucus be loatra amin'ny lalan'ny orona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » zaza » Fahadiovan'ny orona amin'ny zazakely
Ahoana no hahafantaranao raha olona tonga lafatra ianao
Sombin'akoho miaraka amin'ny dipoavatra mena sy amandy